म रिलेसनसिपमा छु - कुराकानी - साप्ताहिक
 सलिनमान बनियाँ, अभिनेता
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर–२’ मार्फत रजतपटमा उदाएका अभिनेता सलिनमान बनियाँ युवापुस्तामाझ लोकप्रिय अनुहार हुन् । पहिलो चलचित्रबाटै युथ आइकनको छवि बनाएका सलिनमानका महिला प्रशंसकको संख्या प्रशस्तै छ । ५ फिट ९ इन्च अग्ला सलिनमानले स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेका छन् । २५ वर्षीय सलिनमान चलचित्र ‘यात्रा : अ म्युजिकल भ्लग’ मार्फत पुनः एकपटक दर्शकमाझ आउने तयारी गरिरहेका छन् । मानिसहरू तपाईंको थरसँग झुक्किएको पाइन्छ, तपाईं बानियाँ कि बनियाँ ? म नेवार समुदायमा जन्मिएकाले मेरो थर बनियाँ । बानियाँचाहिं क्षेत्रीहरूले लेख्नुहुन्छ ।
दोस्रो चलचित्र यात्राबाट कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?
उत्साहित छु । एउटा राम्रो चलचित्र बनेको छ । मैले भ्लगरको भूमिका निर्वाह गरेको छु । रोमान्टिक चलचित्र भए पनि यसपटक एक्सनमा पनि राम्रै मेहनत गरेको छु ।
यात्रा किन हेर्ने ?
यात्रा एउटा बिल्कुलै फरक जनराको मनोरञ्जक चलचित्र हो । ब्लगिङ, भ्लगिङ गर्ने एउटा पुस्तालाई यो चलचित्रले प्रतिनिधित्व गरेको छ । चलचित्रमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास समेत गरिएको छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यो चलचित्र विशुद्ध मनोरञ्जनका लागि हेर्ने हो ।
तपाईं कहिलेदेखि फेसनेवल हुन थाल्नुभएको हो ?
करिब चार वर्ष भयो मैले आफ्नो फेसन र स्टाइललाई ध्यान दिन थालेको ।
तपाईंका स्टाइल गुरु पनि छन् कि ?
त्यस्तो त कोही छैन । यद्यपि मेरो भिनाजु सविनमान ताम्राकारले मलाई स्टाइलिस्ट
बन्ने टिप्स दिनुभएको थियो । त्यसबाहेक म गायक जस्टिन बिबरलाई लामो समयदेखि फलो गरिरहेको छु । बिबरकै कारण ममा फेसन र स्टाइलिङको सेन्स विकासित भएको हो ।
प्रायः लङ वेयरलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि ?
मेरो शारीरिक बनावटअनुसार लामो पहिरन सुहाउँछ भन्ने लागेपछि प्रायः लामै पहिरन लगाउँछु । जाडोमा ओभरकोट छुटाउँदिनँ, गर्मीमा लगाउने टिसर्ट पनि लङ नै छन् ।
ओभरकोटको त कलेक्सन नै होला हैन ?
त्यस्तै १९–२० वटा जति छन् ।
पहिरनको सपिङ कहाँ गर्नुहुन्छ ?
प्रायः विदेशबाट मगाउँछु । काठमाडौंमै लिनुपर्‍यो भने डिजाइनर वेयरलाई प्राथमिकता दिन्छु । त्यसबाहेक नयाँ–नयाँ स्टाइलका पहिरनका लागि सिभिल मल तथा कोरियन सप गैरहन्छु ।
हेयर स्टाइल चाहिं कोबाट प्रभावित हो ?
यो मेरो आफ्नै स्टाइल हो । म प्रायः लक्ष्मी हेयर सैलुनमा आफ्नो हेयर स्टाइल बनाउँछु ।
ब्रेकअप भएको छ कि छैन ?
त्यो त अभियस्ली भैहाल्छ नि । धेरै पटक भएको छ ।